Fadeexada Xashiishada Ee Wiilka Uu Dhalay Madaxweyne Ku Xigeenka Maraykanka Oo Gilgishay Joe Biden | Hawraar
Fadeexada Xashiishada Ee Wiilka Uu Dhalay Madaxweyne Ku Xigeenka Maraykanka Oo Gilgishay Joe Biden
Fadeexada ka dhalatay, dhaqan xumada uu ku kacay wiilka uu dhalay Madaxweyne ku xigeenka dalka Maraykanka Joe Biden, ayaa cirka isku sii shareerta, ka dib markii qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi faalooyin ay naqdinayaan, Hunter Biden wiilka madaxweyne ku xigeenku dhalay ay baahiyeen.
Wiilkan uu dhalay Madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Hunter Biden oo labo iyo afartan jir ah, ayaa todobaadkii hore laga caydhiyay ciidamada Bada ee dalka Maraykanka, ka dib markii lagu qabtay isaga oo dhuuqaya, xashiishada halista ah ee cocaine.
Haddaba markii warka eriga Hunter Biden soo baxay, ayaa majalada todobaadlaha ah ee Weekly Standard, daabacday, faalo dheer oo ay isku bar bar dhigayso, fadeexadan iyo tii ku habsatay, senator lagu magacaabo, Sen. Joseph McCarthy, kaas oo himiladiisi siyaasadeed ay galaafatay, xashiishada Cocaine-ta oo lagu helay.
Wargayska ayaa faaladiisan isku waydiiyay, saamaynta fadeexada wiilkan uu dhalay Madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Joe Biden ku yeelan karto mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo sumcadiisa, waxaanay faaladani ku fogaatay, sida lagama maarmaanka ay u tahay, in carruurta Madaxdu dhashay iyo kuwa kale ee muwaadiniintu ay isku sharci u wada maraan.
Faaladan ayaa aad u dhaliishay dib u dhaca ku yimi caydhinta wiilka madaxweyne ku xigeenka Maraykanku dhalay, ee ciidamada Bada, waxaanay jariiradu tilmaantay in ninkan fadeexada xashiishadu ku cadaatay bishii koowaad ee sanadka, shaqadana laga eryay bishii tobnaad, halka xubnaha kale ee lagu helo anshax xumo ciidamada gudahooda deg deg maxkamad loo soo taago.
In kasta oo uu warka fadeexada Hunter Biden si wayn loo faafiyay, haddana waxa qaar badan oo ka mid ah warbaahinta dalka Maraykanku saluug ka muujisay, hab dhaqanka ciidamada iyo laamaha dawlada oo ay ku eedaynayaan, inay u dhaqmayaan sidii xukuumadaha shuuciga ah oo kale, oo aanay sharciga sidii loogu talo galay u marin dadka maal qabeenada iyo madaxda sare sare dhaleen.
Madaxweyne Ku xigeenka Maraykanka Joe Biden oo ka mid ah siyaasiyiinta rug cadaaga ah ee dalkaas, waxa bishan gudaheeda isugu biiray, fadeexada wiilkiisa ee ciidamada bada lagaga eryay iyo fadeexad kale oo siyaadeed oo uu ka mutay, hadalo is dhaaf ah oo ka soo yeedhay isaga laftiisa, sida canbaarayn aanu u meel dayin oo uu dhawaan dusha uga tuura, waddamo saaxiibo dhow la ah Maraykanka, gaar ahaan Sucuudi Arabia, Imaarat-ka Carabta iyo Turkey, taas oo uu markii danbe Raali gelin ka bixiyay.